Ireo toko teo aloha dia naneho fa ny taona nomerika dia mamorona fomba vaovao hanangonana sy handinihana ny angona sosialy. Ny faharetan'ny dizitaly koa dia namorona fanamby vaovao etika. Ny tanjon'ity toko ity dia ny hanome anao ireo fitaovana ilainao handraisana ireo fanamby ara-ethika ireo.
Misy ny tsy fahazoana antoka momba ny fitondran-tena mety amin'ny fikarohana ara-tsosialy dizitaly. Ity fisalasalana ity dia nitarika olana roa mifandraika, ny iray amin'ireo dia nahasarika bebe kokoa noho ny iray hafa. Etsy andaniny, misy mpikaroka sasany no voampanga ho manitsakitsaka ny fiainan'ny olona na misoratra amin'ny mpandray anjara amin'ny fanandramana tsy miangatra. Ireo tranga ireo-izay horesahiko ato amin'ity toko ity-dia resaka adihevitra mafana sy adihevitra. Etsy andaniny, ny fisalasalana ara-pananahana ihany koa dia nanana fiantraikany mahatsiravina, nanakana ny fikarohana ara-tsosialy sy manan-danja tsy hitranga, zava-misy izay heveriko fa tsy dia ankasitrahana loatra. Ohatra, nandritra ny fipoahana Ebola 2014, ireo mpiasam-panjakana misahana ny fahasalamana dia naniry ny vaovao momba ny fahaleovantenan'ny olona any amin'ny firenena be aretina indrindra mba hanamafisana ny fihanaky ny fipoahana. Ny orinasan-telefaona finday dia nanana rakitra an-tsipiriany an-tsipirihany izay mety nanome ny sasany amin'ireo vaovao ireo Na izany aza anefa, ny olana ara-toekarena sy ara-dalàna dia nanilika ny fanandraman'ny mpikaroka handinika ny angona (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016) . Raha toa isika, amin'ny maha-fiaraha-monina, dia afaka mampitombo ny fitsipika sy fenitra arahin'ny mpikaroka sy ny vahoaka - ary mieritreritra fa afaka manao izany isika-dia afaka mampiasa ny fahaiza-manaon'ny vanim-potoana nomerika amin'ny fomba izay tompon'andraikitra sy mahasoa ny fiarahamonina .
Ny sakana iray amin'ny fananganana ireo fenitra ifampizarana ireo dia midika fa ny mpahay siansa sosialy sy ny mpahay siansa dia manana fomba fijery hafa momba ny etika fikarohana. Ho an'ny mpahay siansa sosialy, ny fiheverana momba ny etika dia voatanisa ao amin'ny Institutional Review Boards (IRBs) sy ny fitsipika napetrak'izy ireo amin'ny fampiharana. Raha ny marina, ny hany làlan-kevitry ny mpahay siansa ara-tsosialy indrindra dia miaina adihevitra ety anaty aterineto dia amin'ny alàlan'ny fomba fijerin'ny IRB. Ny mpahay siansa momba ny data, etsy ankilany, dia tsy dia manana traikefa matanjaka amin'ny fikarohana etika satria tsy resahina matetika amin'ny siansa sy ny teknika informatika. Tsy misy amin'ireo fomba fiasa ireo-ny fitsipiky ny fitsipika mifototra amin'ny mpahay siansa sosialy na ny ad hoc mpahay siansa momba ny data-dia tsara ho an'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika. Mino kosa aho fa handroso isika, amin'ny maha-fiarahamonina antsika, raha toa ka manaiky fomba fijery mifototra amin'ny fitsipika isika . Izany hoe, ny mpikaroka dia tokony handinika ny fikarohana ataony amin'ny alàlan'ny fitsipika misy ankehitriny - izay horaisiko araka ny nomena sy ny fiheverana dia tokony arahina - ary amin'ny alalan'ireo fitsipika ara-ethika ankapobeny. Ity fomba fiasa mifototra amin'ny fitsipika ity dia manampy ireo mpikaroka hanapa-kevitra ara-drariny ho an'ireo tranga izay mbola tsy nosoratana ny fitsipika, ary manampy ny mpikaroka hampita hevitra amin'ny samy izy sy ny vahoaka.
Ny fomba fiasa mifototra amin'ny fitsipika izay tiako dia tsy vaovao. Miteraka am-polony am-polon-taona maro izany, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nipoitra tamin'ny tatitra roa lehibe: ny Belmont Report sy ny Tatitra Menlo. Araka ny hitanao, amin'ny tranga sasany dia mitarika vahaolana mazava sy azo atao ny fampiharana fitsipika. Ary, raha tsy mitondra vahaolana toy izany, dia manazava fa ny fifanakalozam-barotra tafiditra amin'izany, izay manakiana ny fanamafisana lanjany. Ankoatra izany, ny fomba fiasa mifototra amin'ny fitsipika dia ampy amin'ny ankapobeny mba hanampy azy na aiza na aiza misy anao (ohatra ny oniversite, ny governemanta, ONG, na orinasa).
Ity toko ity dia natao hanampiana mpikaroka iray mahomby. Ahoana no tokony hiheveranao ny etikan'ny asanao? Inona no azonao atao mba hanatsarana ny asanao manokana? Ao amin'ny fizarana 6.2, hamaritra tetikasa fikarohana siantifika telo aho izay nahatonga adihevitra ara-tsosialy. Avy eo, ao amin'ny fizarana 6.3, hanainga ireo ohatra ireo aho mba hamariparitra ny eritreritro fa ny antony fototra amin'ny fisalasalàna ara-tsosialy: ny fitomboan'ny herinaratra ho an'ny mpikaroka mba handinika sy hanandrana ny olona tsy misy ny faneken'izy ireo na ny fanentanana akory aza. Ireo fiasa ireo dia miova haingana kokoa noho ny fitsipika sy lalàna ary lalàna. Avy eo, ao amin'ny fizarana 6.4, dia hilazako fitsipika efatra efa misy izay afaka mitari-dalana ny fisainanao: Hajao ny olona, ​​ny fahamendrehana, ny rariny, ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro. Avy eo, ao amin'ny fizarana faha-6.5, hamintina fitsipika roa momba ny fitsipika etika-manaraka sy ny deontology aho-izay afaka manampy anao amin'ny iray amin'ireo fanamby lalina izay mety hiatrika anao: rahoviana ianao no tokony hampiasa fomba mahalasa saina amin'ny fomba mahomby mba hahazoana endriny ara-moraly. Ireo fitsipika sy fitsipika etika izay voafintina ao amin'ny sary 6.1-dia ahafahanao mandroso tsy mifantoka amin'ny zavatra azon'ireo fitsipika efa misy ary mampitombo ny fahafahanao mifampiresaka amin'ny hevitra sy ny mpikaroka hafa.
Amin'io anton-javatra io, ao amin'ny fizarana 6.6, dia hifanakalo faritra efatra izay tena sarotra ho an'ny mpikaroka ara-tsosialy maromaro aho: fampahafantarana voamarina (fizarana 6.6.1), fahatakarana sy fitantanana loza mety hitranga (fizarana 6.6.2), fiainana manokana (fizarana 6.6.3 ), ary manao fanapahan-kevitra ara-batana raha misy tsy fahatokisana (fizarana 6.6.4). Farany, ao amin'ny fizarana 6.7, dia hanolotra tolo-kevitra telo ho an'ny miasa ao amin'ny faritra iray miaraka amin'ny etika tsy misy saina aho. Ny toko dia mifarana amin'ny appendice ara-tantara, izay mamintina fohifohy ny fivoaran'ny fikarohana momba ny etika fikarohana ao Etazonia, ka tafiditra ao anatin'izany ny famaritana ny Fikarohana Syphilis Tuskegee, ny Tatitra Belmont, ny Common Rule, ary ny Menlo Report.
Figure 6.1: Ny fitsipika mifehy ny fikarohana dia avy amin'ny toro lalana izay avy amin'ny rafitra etika. Ny teboka fototra amin'ity toko ity dia ny handinihan'ny mpikaroka ny fikarohana ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitsipika misy ankehitriny - izay horaisiko araka ny nomena sy ny fiheverana dia tokony arahina - ary amin'ny alalan'ireo fitsipika ara-ethika ankapobeny. Ny Fitsipika iombonana dia ny andalana fitsipika amin'izao fotoana izao izay mifehy ny fikarohana ara-bola be indrindra ao Etazonia (raha mila fanazavana bebe kokoa, jereo ny appendice ara-tantara amin'ity toko ity). Ireo fitsipika efatra dia avy amin'ny tontolon'ny manga roa izay noforonina mba hanomezana tari-dalana ara-ethika ho an'ny mpikaroka: ny Belmont Report sy ny Menlo Report (raha mila fanazavana bebe kokoa, jereo ny appendice ara-tantara). Farany, ny fitenenana sy ny deontolojia dia rafitra etika izay noforonin'ireo filozofa nandritra ny taonjato maro. Fomba haingana sy manahirana hanavaka ireo sehatra roa ireo dia ny fifantohana ireo mpitsabo dia mifantoka amin'ny fitaovam-piasana sy ny tanjon'ireo mpanohitra.